2008 NRA Tech Pavilion nasongadina tamin'ny fampisehoana nomerika | Martech Zone
Wednesday, May 21, 2008 Zoma 17 Novambra 2017 Douglas Karr
Ity no taona voalohany niarahako tamin'ny Konferansa NRA. Ankoatry ny fanaovana fanatanjahan-tena bebe kokoa noho izaho, amin'ny fandehanana an-tongotra, tsy fampisehoana teknolojia goavambe ilay fampisehoana. Angamba ny haitao mangatsiatsiaka indrindra any (ankoatry ny Patronpath) dia fampisehoana nomerika, fantatra amin'ny hoe Hafanàm-po an signage.
Ny fampiratiana dizitaly dia fampisehoana HDTV lehibe izay mampiseho haino aman-jery feno (horonan-tsary sy sary) ary afaka manitsy ny fandefasana hafatra raha ilaina. Ao anatin'ny indostrian'ny sakafo dia misy fiasa mahafinaritra - toy ny fampifandraisana mivantana amin'ny rafitra Point of Sales hahazoana ny vidiny farany - na ny fanavaozana ny fampisehoana mavitrika hanatsarana ny varotra. Alao sary an-tsaina ny seho nomerika ao amin'ny McDonalds izay nanana burger sizzling sy soda iray misy miboiboika mipoitra avo be. Teknolojia tsara io!
Ity misy horonantsary hitako tamin'ny Internet momba ny Museum of Arts and Design sy ny signage-dry zareo:
Toerana iray hafa isehoan'ireto dia ao amin'ny Movie Cinemas. Ny efitrano Allure (sary nonoiko nono) dia nahitana fampisehoana ambony mitsangana izay nampiseho ilay afisy tamin'ny clip topy maso misy ilay horonan-tsary… maranitra be! Atambatra amin'ny dokam-barotra amin'ny feo mandeha - mety ho goavana io.
Ivelan'ny vokatra sy ny takelaka nomerika, tsy dia nisy loatra ny zava-nitranga teo amin'ny lafiny teknikan'ity orinasa ity. Nandritra ny seho dia nanatsara ny rindranasan'ny mpanjifa tamin'ireo mpanjifantsika POS tafiditra… ity misy sary nalain'i Marty:
Tags: Fampisehoana nomerikaHafanàm-po an signagefikambanan'ny trano fisakafoanana nasionalynra
Nisy paikadin'ny motera fikarohana nitondra ny Super Bowl 2012 tany Indianapolis?
May 23, 2008 amin'ny 8: 53 AM
Ny eritreritro voalohany amin'ny lohatenin'ny paositra dia hoe inona no azon'ny Patronpath tombony amin'ny NRA (National Rifle Association), avy eo nahavoa ahy, NRA hafa. 🙂